In ka badan 100 sababood oo lagu cayminayo safarka doontaada | Maraakiibta Absolut
In ka badan 100 sababood oo lagu cayminayo safarka doontaada
Markaan safrayno ama aan dalbanayno safarkeena Ma jeclin inaan u malayno inay tahay inaan caymisno ha ahaato sabab la xiriirta baajinta, luminta, jirro ama xatooyo, si kastaba ha ahaatee, markii wax lama filaan ah kugu dhacaan, waad ku faraxsan tahay inaad qaadatay caymis. Sida iska cad ma dhammaystirto dhibaatadii hore iyo xanaaqii masiibada, laakiin ugu yaraan haa waa lagu magdhabaa.
Marka laga hadlayo safarrada, sababo la xiriira sifooyinkooda gaarka ah, waxaa jira waqtiyo caymiska safarka guud uusan daboolin dhammaan kiisaska iyo dhacdooyinka lama filaanka ah ee dhici kara, waana inaad caddeysaa inuu yahay safar doon. Waxaan kugula talinayaa inaad si fiican u akhrido maqaalkan, gaar ahaan haddii aadan khibrad badan u lahayn safarka.
1 Caymiska baajinta ama joojinta
2 Caymis leh caymis caafimaad
3 Caymiska luminta alaabta
4 Waa hubaal markab dalxiis, laakiin dhul baa layga dhacaa
Caymiska baajinta ama joojinta
Sida safarrada badiyaa yihiin buugga celcelis ahaan 71 maalmood kahor, waxaa suurtogal ah, in marka daqiiqaddu soo dhawaato, waa inaad baajiso. Maalin dhawayd qaar ka mid ah asxaabtaydu waxay ii sheegeen inay ugu yeedheen goob doorasho oo ay ka baaqdeen safarka, laakiin ugu yaraan waxay awoodeen inay beddelaan taariikhda lacag la’aan.
Waa muhiim inaad taas ogaatid dhammaan safarrada lagama rabo inay ku magdhabaan haddii ay dhacdo in safarka la baajiyo ama haddii mid ka mid ah joogsiyada aan la samayn, in kasta oo cimiladu xun tahay oo nagu qasbeysa inaan beddelno jidka. Waxaad si fiican u hubin kartaa suurtogalnimada dib u helista lacagtaada, ama ugu yaraan qayb weyn, ka hor intaadan xirin safarkaaga. Kani waa baajin ay sameysay shirkadda bixisay doonida, laakiin Arrin kale ayaa ah inaad go'aansato inaad baajiso.
Markaad go'aansato inaad caymiso safarkaaga, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa sababaha kugu horseedi kara inaad baajiso safarkaaga, tusaale ahaan, waxaa jira waqtiyo aysan kuu oggolaanayn inaad safarto sababtoo ah waxaad ku jirtaa waqtiga uurka oo horumarsan, oo haddana aanad dib u helin lacagtaadii.
Waqtiyada kale caymisku wuu ku daboolayaa qaar ka mid ah dhacdooyinka lama -filaanka ah sida xaaladaha degdegga ah ee qoyska, masiibooyinka dabiiciga ah, shil, jirro…. Qaddarka aad caymisay waa la soo celin doonaa illaa inta baajinta laga fiirsanayo qodobbada caymiska. Waa kan liiska talooyin loogu talagalay dalxiiska markii ugu horeysay.
Qaarbaa jira caymisyada leh qiimo go'an oo ku xiran meesha loo socdo qofka safarka ah iyo kuwa kale ee khuseeya boqolleyda soo noqoshada xaddiga safarka. Lacag celintani waa 5% ka badan ama ka yar, oo waa haddii sababtu tahay qiil. Isha! Sababtoo ah haddii aad bixiso tigidhada ku socdaal kaarka deynta, qaarkood waxaa ka mid ah caymiska baajinta. Si fiican u ogow haddii kaarkaagu bixiyo caymiskan.
Caymis leh caymis caafimaad
Su'aal kale oo muhiim ah markaad u safreyso dhowr maalmood, waa maxaa dhacaya haddii aad u baahan tahay caymis caafimaad. Sidaan kuugu sheegnay waqtiyo kale, safarro waxaa jira gargaar caafimaad, in kasta oo tani aad qaali u tahay, haddii aadan haysan caymis caafimaad oo mas'uul ka ah baaritaanka caafimaadka iyo daawooyinka labadaba. Sida caadiga ah caymis dhexdhexaad ah wuxuu ku daboolayaa ilaa 30.000 oo yuuro oo ah kharashyo caafimaad oo la fidin karo, tanna waxaa ku jira kharashyada ilkaha.
Caymiska luminta alaabta
Tani waa mawduuc. Aad u badan waa dhif in shandadaha lagu waayo markab dalxiis, maadaama shixnadda lagu sameeyo isla dekedda. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhici kara waa inaad samaysay safar diyaaradeed oo isku jira oo lagu daray dalxiis iyo in wejiga koowaad boorsooyinkaagu lumeen. Haddii aadan lahayn caymis diyaaradda, qaar ka mid ah shirkadaha caymiska safarka ayaa dammaanad qaada ugu yaraan boorsooyinkaaga, Laakiin dabcan, taasi micnaheedu maahan inaad dib u helayso. Waxaan ka hadlaynaa oo kaliya magdhow.
Waa hubaal markab dalxiis, laakiin dhul baa layga dhacaa
Runtu waxay tahay in maraakiibta sida caadiga ah ay dhacdo dhac loo geysto qolalka. Laakiin Haa, way dhici kartaa marka aad u dhaadhacdo dekadda in boorsadaada la xado ama lumo. Markay sidaas tahay, waa inaad aragtaa haddii caymiskaagu daboolayo oo keliya dhacdooyinka lama -filaanka ah ee saaran guddiga ama haddii ay sidoo kale daboolayaan masiibooyinka dhulka.
Waxaan kugula talineynaa inaad weydiisato caymiska hore ee lacagta. Tani waa haddii kaararkaaga la xado ama lumo waxaad isticmaali kartaa xoogaa lacag caddaan ah ilaa aad ka soo ceshato, mana aha wax yar markaad ka safrayso deked ilaa deked. Ugu yaraan waxay kuu sahlaysaa inaad ku sii raaxaysato fasaxaaga.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinkan aan kaa caawinnay inaad go'aan ka gaarto caymiska safarka ugu fiican, wax aan rajeynayo inaadan isticmaalin, laakiin haddii loo baahdo, waad ku farxi doontaa inaad sidaas sameysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Maraakiibta Absolut » General » In ka badan 100 sababood oo lagu cayminayo safarka doontaada
Dhammaan furayaasha, sida laga soo xigtay shirkadda maraakiibta, ee anshaxa markab
Sida loo hubiyo in lagu soo galo dalxiiska dekedda